Yemahara software uye dambudziko. Kubata yambiro nezvekukurumidzira | Linux Vakapindwa muropa
Munguva dzekukurumidzira, kufambiswa kweruzivo rwechokwadi kunokosha. Mune Nyaya yapfuura Isu takaongorora dzimwe nzira dzinovhura sosi zvigadzirwa zvemidziyo, senge Raspberry Pi imwechete bhodhi komputa, vanobatsira vanobatana kune iro basa revateereri.
Ipapo Tichaona imwe chikamu mune yemahara uye yakavhurwa sosi software iri yakanakisa sarudzo. Iwo zvirongwa zvekuzivisa zvekukurumidzira.
1 Yemahara software uye dambudziko. Hunhu hweanokurumidzira ziviso zvirongwa
1.1 Zvishandiso zve software ye emergency ziviso
1.2 Hunhu hwechakanaka emergency ziviso system
Yemahara software uye dambudziko. Hunhu hweanokurumidzira ziviso zvirongwa
Vazhinji vedu tinorarama hupenyu hwakachengetedzwa kana zvasvika panjodzi. Avo vedu vanogara mumaguta vangatambura kudzimwa kwemagetsi, mafashama madiki anokonzerwa nemvura shomana asi inorema, kana tsaona yakanyanya yemotokari.
Nekudaro, kune mamirioni e vanhu avo, nekuda kwenzvimbo yavanogara, vanooneswa netsunami, kudengenyeka kwenyika, chamupupuri, kuputika kwemakomo, kuburitswa nemwaranzi uye mamwe marudzi ezviitiko zvakasikwa kana zvakagadzirwa nevanhu.. Ivo vanoda mukana wekuwana-chaiyo-nguva ruzivo iyo inovabvumidza ivo kuita inodiwa gadziriro yekuzvidzivirira pachavo
Kubudikidza Uchishandisa zvirongwa zvekuzivisa nezvekukurumidzira unogona kutumira zviziviso zvine chekuita neavo vakawirwa nenjodzi iyi. Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nekushandiswa kwemaemail, mameseji, runhare, magudzanzwi, sairini, terevhizheni, redhiyo, nezvimwe.
Kune maviri marudzi e emergency ziviso software; izvo zvinokonzereswa otomatiki nekuona zviratidzo zvine njodzi (semuenzaniso, misiyano mune seismograph) uye izvo zvinokonzereswa nemushandisi. Muchiitiko chekupedzisira, ivo vakagadzirirwa kutanga munguva ipfupi uye neyakagadziriswa gadziriso.
Zvishandiso zve software ye emergency ziviso
Zvakakosha midziyo kudzima semagetsi emagetsi kana zvakakosha zvekurapa zvekuchengetedza hupenyu.
Shanduko mumamiriro ekunze izvo zvinogona kusanganisira njodzi.
Ruza yezvinhu zvine chepfu.
Kuvuza mumagetsi enyukireya.
Nyaya dzekuchengetedza muviri uye virutal.
Tsaona nenzira yekutakura.
Mumwe anogona kutenda (pachokwadi yaive kesi yangu pandakatanga kutsvaga yechinyorwa) icho mhando iyi yechirongwa yaizongobatsira chete kumasangano ehurumende zvine chekuita nekutarisira njodzi. Nekudaro, kushandiswa kwayo kunoenderera zvakanyanya.
Masangano mukati: Kune vanhu vanoverengeka kubva ipapo, kusheedza mumwe nemumwe hakumhanyi zvakakwana. Uye kutumira meseji yeWhatsApp kune rimwe boka kungasaite.
Zvipatara: Denda reCoronavirus rinotipa muenzaniso wakanaka wekubatsira kwerudzi urwu rwechirongwa. Kana nyaya yakanaka ikaonekwa kubva kumurwere anga asina kunyatsosarudzika, iyo sisitimu inogona kunyevera varwere vane nguva dzakatarwa kuti vasazviratidze uye vobvunza avo vaisangana nekuzvidzivirira.
Mafekitori: Makambani mazhinji anoshandisa zvinokuvadza zvinokurumidza kukonzera njodzi. Yambiro yekukurumidzira inobvumidza kugamuchirwa nekukurumidza kwezvimisikidzo zvine zviga.
Kugovera ngetani: Munyika zhinji tiri kuona kuwedzera mukuda kwezvinhu zvakasiyana siyana sechikamu chekushushikana kunokonzerwa nezviyero zvehurumende. Izvi zvinogona kutungamira kune imwe mhando yechitoro-kunze. Masystem ekuzivisa anoita kuti vagadziri nevanovagovera vazive nezve izvo zvinodikanwa nevatengesi. Izvo zvakare zvichavatendera ivo kuti vapindure pakuderera kwekudiwa uko kunozokonzeresa kudzoka kune zvakajairika kana matanho ekurwisa squatting.
Hunhu hwechakanaka emergency ziviso system
Kugona kuzadzisa zvinangwa zvako, emergency ziviso masystem anofanirwa kusangana neanotevera maitiro:
Speed: Kana mashoma masekonzi achigona kuita mutsauko pakati pehupenyu nerufu, kumhanya ndiko kuita kwakakomba. Yambiro inofanira kusvika kune inomugamuchira nekukurumidza sezvazvinogona.
Kutungamira kwenzvimbo dzakawanda dzekutaurirana: Mune emergency, mitsara yepasi haigone kushanda, uye maseru maseru ari. Panyaya yekundikana kwemagetsi, zvinopesana zvinoitika. Zvichida zvinogona kunge kuti ari kugamuchira haasi kuteerera foni nekuti anonakidzwa nekutarisa terevhizheni. Iyo yakanaka yekuzivisa system inofanirwa kuve nekwanisi yekutumira meseji neimwe nzira.
Akangwara manejimendi evanogamuchira: Yambiro inoshanda inofanirwa kutora meseji chaiyo kune vanokodzera vanogamuchira.
Tevera uye tsvaga pane mepu: Nguva zhinji, iyo nzira yekuona kuti ndiani wekunyevera iri nenzvimbo yavo.
Nzira mbiri dzekutaurirana: Vanhu vanogamuchira yambiro vanogona kunge vaine mibvunzo isina kuvharwa neshoko kana kukwanisa kupa rumwe ruzivo. Ndokusaka chirongwa ichi chichifanira kubvumidza nzira mbiri dzekutaurirana.
Muchinyorwa chinotevera tichaongorora mamwe akavhurwa sosi mapurojekiti ekugadzirwa kwe emergency emergency system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yemahara software uye dambudziko. Kubata yambiro dzekukurumidzira